वास्तविक रेशम, रेयन र वास्तविक रेशम साटन को पहिचान
1 वास्तविक रेशम साटन प्राकृतिक रेशमबाट बनेको छ, रेशम सतह चिल्लो र उज्यालो छ, हात राम्रो र सुरुचिपूर्ण महसुस गर्दछ, यो सास फेर्ने छ र उमस लाग्दैन;2रेयन कपडा नराम्रो र कडा महसुस हुन्छ, र भारी महसुस हुन्छ। यो तातो र वायुरोधी छ।3वास्तविक रेशम साटन को संकुचन दर सापेक्ष छ ...
पजामाको लागि कस्तो कपडा राम्रो छ
1. कपास पजामा फाइदाहरू: शुद्ध कपास पजामा राम्रो नमी अवशोषण र सास फेर्ने क्षमता, नरम र छाला-अनुकूल छ, र तपाईं एक उत्तम आरामदायक अनुभव ल्याउन सक्छ। थप रूपमा, शुद्ध कपास पजामा कपासबाट बुनेको छ, जुन प्राकृतिक, प्रदूषण-मुक्त छ, छालामा जलन गर्दैन, र ...
विभिन्न प्रकारका पजामा
21-12-08 मा व्यवस्थापक द्वारा
मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधारसँगै पजामामा परिवर्तनहरू उल्टो भएको छ। प्रारम्भिक वर्षहरूमा, मानिसहरूले आफ्नो क्लोज-फिटिंग शरद लुगाहरू र लामो ट्राउजरहरू पजामाको रूपमा लिएर पजामाको लामो समयसम्म चल्ने इतिहास सुरु गरे। आधुनिक मानिसहरूको वार्डरोबमा, त्यहाँ उपयोगी छन् ...
1. कुन राम्रो हो, फ्लानेल वा कोरल ऊन? फ्ल्यानेल: ऊन कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, आलीशान अपेक्षाकृत राम्रो र कम्प्याक्ट छ, धेरै बाक्लो छ, र राम्रो न्यानो अवधारण प्रभाव छ। छाला-अनुकूल र नरम, विकृत गर्न सजिलो छैन। र टेक्नोलोजीको विकासको साथ, हालको फ्लानेल पायजामा शुल्क ...
1 कुन राम्रो हो, शुद्ध कपास वा मोडल? शुद्ध कपास: यसमा राम्रो आर्द्रता अवशोषण, राम्रो न्यानो प्रतिधारण र एन्टिस्टेटिक गुणहरू, सास फेर्न सकिने पसिना, छाला-अनुकूल र नरम मलहरू छन्। यसबाहेक, शुद्ध कपास पजामा कपासबाट बुनेको छ, जुन प्राकृतिक रूपमा प्रदूषण-रहित छ, जलन गर्दैन ...
पजामाका कपडाहरू कति प्रकारका छन्
1. साधारण पजामा शुद्ध सूती कपडा: अनौपचारिक पजामाहरू प्राय: साधारण शुद्ध कपास सामग्रीबाट बनेका हुन्छन्। समावेश अलि नराम्रो छ। पानी भित्र पसेपछि सजिलै झर्न र विकृत गर्न सजिलो हुन्छ। २. मर्सराइज्ड कपास कपडा साधारण शुद्ध सूती कपडाबाट बनेको हुन्छ। यसबाट बनेको पजामा...
हाम्रा केटाहरूको पजामा तिम्रो भन्दा धेरै प्यारो छ
हरेक चोटि उसको औंलाहरूले पत्रिकाको पाना पल्टाउँछन्, उसले छाला तल झरेको रेशमको चिल्लोपन र चिल्लोपन महसुस गर्न सक्छ। केही बेरपछि निन्द्राले भरियो । अरूहरू अझै पनि राजाको महिमाको लागि लडिरहेका छन्, र उसले पहिले नै एउटा खुट्टाको साथ फेसन सर्कलमा कदम चालेको छ। गि...
केटाहरूको पजामा तिम्रो भन्दा धेरै प्यारो छ
मेरो छात्रावास बाथरूम नजिकै छ। हरेक रात, त्यहाँ सधैं सबै प्रकारका केटाहरू धुने माध्यमबाट जान्छन्, र यो लगभग एघार बजेको छ, यहाँ सबैभन्दा व्यस्त ठाउँ हो। नीलो धुने बेसिन र गुलाबी केतली। यस समयमा, ए यी, जो सधैं बाहिर एक गम्भीर रूममेट हुन्छ, अनुहार लगाउने थियो ...
रेशम पजामा कसरी धुने?
रेशम पजामा सफा गर्ने आधारभूत ज्ञान साझा गर्नुहोस् 1. रेशम पायजामा धुँदा, लुगा पल्टाउनुपर्छ। गाढा रेशमी लुगाहरू हल्का रङहरूबाट अलग धुनुपर्छ; 2. पसिना आउने रेशमी लुगा तुरुन्तै धुनुपर्छ वा सफा पानीमा भिजाउनु पर्छ, र तातो पानीले धुनु हुँदैन।
रेशम पजामा कसरी धुने? रेशम पजामा सफा गर्ने आधारभूत ज्ञान साझा गर्नुहोस् पजामा सुत्नको लागि नजिक-फिटिंग लुगा हो। धेरै साथीहरूले राम्रो गुणस्तरको पजामा रोजिरहेका छन्। रेशम पजामा पनि सबै माझ लोकप्रिय छ। तर रेशमी पजामा सफा गर्न झन् झन्झटिलो हुन्छ, त्यसैले रेशमी पजामा कसरी धुने? थ...
तातो फ्लानेल पजामा
फलानेल पनि अपेक्षाकृत न्यानो कपडा हो, नरम र आरामदायक, शरद र जाडो पहिरन को लागी उपयुक्त। इन्टरनेटमा फ्ल्यानेल खोज्दै, पप आउट भएका सबै तल रंगीन प्लेड थिए, जुन फ्ल्यानेलको सबैभन्दा क्लासिक ढाँचा पनि हो। शरद ऋतु र जाडो प्रचलनमा ध्यान दिने परीहरू ...
जब यो सबैभन्दा न्यानो घरको कपडा सामग्रीको कुरा आउँछ, दिमागमा आउने पहिलो कुरा फ्लीस हो। विशेष गरी शरद ऋतु र जाडो मौसमहरूमा, आलीशान बनावट विशेष गरी छाला-अनुकूल छ, यति न्यानो छ कि तपाईं यसलाई हटाउन चाहनुहुन्न। विशेष गरी ग्वान्झाउमा, जहाँ घर भित्र भन्दा चिसो छ ...
खुट्टा मोजा, मोजा शैलीहरू,
नि: शुल्क उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्